‘अमेरिकीन बच्चा’ जन्मिएपछी परिवारलाई लाग्यो शंका, सत्य थाहा पाउदा उडायो होश ! – Kavrepati
Home / समाचार / ‘अमेरिकीन बच्चा’ जन्मिएपछी परिवारलाई लाग्यो शंका, सत्य थाहा पाउदा उडायो होश !
admin September 16, 2021	समाचार Leaveacomment 405 Views
वास्तवमा मुगेर कि एक महिला लाई अस्पतालमा राती भर्ना गरिएको थियो । उनको शरीरमा मात्र ६ ग्राम हीमोग्लोबिन भेटिएको कारण त्यहाँका कनिष्ठ डाक्टरहरुले ती महिलालाई आज राती यहि सुत्नु पर्ने बताए।
त्यो बच्चा राती ठीक १२:०० मा जन्मेको थियो र त्यो बच्चाको रुप देखेर वरपरका सबैजना छक्क परे। त्यो बच्चालाई देखेर त्यहाँका मानिसहरु र उसको परिवार यति खुसी छन् कि सबैजना उनीसंग सेल्फी लिन आउँदैछन्।
बच्चा को रंग पूरै दूधिया सेतो भएको कारण, यो एक यूरोपीयन बच्चा हो जस्तो देखिन्छ। डाक्टरहरुका अनुसार जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कलेजमा खैरो रंगको बच्चा जन्मेको यो पहिलो घटना हो।
यदि हामी बच्चा को यो रंग को कारण को बारे मा कुरा गर्छौं, तब त्यहाँ सबै को शरीर मा एक वर्णक छ, जसको कारण उनको शरीर को रंग यो रंगमा परिबर्तन हुन सक्छ । डाक्टरहरुका अनुसार यस्ता केसहरु शरीरमा अल्बिनोको कमीका कारण उत्पन्न हुन्छन्।
सामान्यतया यो देखिएको छ कि यदि एक बच्चा अन्य बच्चाहरु बाट फरक फरक छ, तब उसको वरपरका मानिसहरु उसको मजाक बनाउन थाल्छन्। यस्तो अवस्थामा बच्चालाई मानसिक तनाव पनि हुन सक्छ। यसैले डाक्टरहरु सधैं सुझाव दिन्छन् कि समाज मा कुनै पनि मानव दु र्व्य व हार वा यस्ता बच्चाहरु को मजाक गर्नु हुँदैन। यदि समाजले यसो गर्यो भने यो बच्चा मा नराम्रो असर पर्न सक्छ।
Previous १९ वर्षीय युवतीको टिकटक बनाउदा सेती नदिमा खसेर म त्यु भयो,भिडियोमा यस्तो दर्दनाक दृश्य देखियो (भिडियो हेर्नुस्)
Next संखुवासभा प्रकरणमा नयाँ मोड, अर्का ब्याक्ति पनि पक्राउ परे